यस फोटोग्राफरले टोकियो र जापानको सडकहरू आफ्नो नियोन बत्तीहरूको साथ चित्रण गर्दछ क्रिएटिव अनलाइन
यो रेखा पहिलो पटक छैन केही शहर दृश्यहरूको ती रातको बत्तीहरू टोकियो जस्ता शहरहरु बाट। केही फोटोग्राफर अझै पनि ती नियोन बत्तीहरूसँग रातहरूद्वारा प्रेरित छन् जुन प्रख्यात एशियाली शहरहरूमा उनीहरूका जुत्ताहरू लगाउँदा विदेशी आगन्तुकहरूको ध्यान आकर्षण गर्दछन्।
यो मोरक्कनको फोटोग्राफर जाकी अब्देलमुनिम हो जसले हामीलाई उनको साथ आश्चर्यचकित गर्दछ शानदार फोटोहरू जसमा टोकियो र ह Hongक Kong जस्ता शहरका सडकहरूको नियन बत्तीहरू राम्रोसँग देख्न सकिन्छ। केहि हडताल क्याप्चरहरू ती एशियन क्यापिटलहरूमा रातमा लिने वेगहरूको प्रकाशका लागि।
लगभग अति वास्तविक फोटो जब टाढाबाट तिनीहरूलाई हेर्दै, तर जब एक मानिसहरूलाई ध्यान दिनुहोस् सडकबाट भएर जाँदा, उसले सबै यथार्थता महसुस गर्छ जुन ती प्रत्येकमा समावेश छ।
लगभग ब्लेड धावक जस्तै एक काल्पनिक बाट लिइएको, ज़की अब्देलमुनिम हामीलाई फोटोहरूको श्रृंखला दिन्छ जसमा उसले केहि साथीहरू समातेको छ कि हँसदै ती मानवीय स्पर्शको साथ जो उनीहरूको वरपरको वास्तुकलाको साथ मिल्दछ।
एक मानवीय अनुभव जुन अब्देलमुनिमको फोटोहरूको साथ सडकहरूमा हुँदै यात्रा गर्दछ उच्चारण त्यो सबै र color्ग प्यालेटमा राख्नुहोस् जसका मुख्य पात्रहरू निलो, रातो र हरियो छन्।
उच्च गतिशील दायरा फोटोहरू नेलको रमणीय दृश्यमा झल्काउन सडकहरू कार र पैदल यात्रीहरूले भरिएका त्यो टोकियो वा ह Hongक Kongको वरिपरि झुण्डियो।
नियोन बत्तीहरू कि भीड क्रिस्टल को प्रतिबिम्ब प्रदर्शकहरु र ती स्टोर को भीड को रात को नायक को रूप मा निर्माण।
El बैजनी पनि धेरै उपस्थित छ जाकीको फोटोग्राफरमा तपाईले अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ जिज्ञासु o Behance.
हामी तपाईंलाई साथमा छोड्दछौं ती फोटोग्राफरहरू जो पनि छ टोकियो मा आफ्नो क्यामेरा लिए; को ध्यान वाकुई.
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » कलाकारहरू » ह Hongक Kong र टोकियो को सडक को तस्वीरहरु मा यो जीवन्त नियन बत्तीहरु